Maamulka Hirshabeele oo si farsameysan u badalay qoondadii haweenka oo ay beelaha lahaayeen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka Hirshabeele oo si farsameysan u badalay qoondadii haweenka oo ay beelaha lahaayeen
Inkastoo doorasahada Aqalka hoose ay haatan mareeyso meel gaba-gabo ah ayaa hadane waxaa soo baxaya in siyaabo kala duwan loo dhaqan geliyay qoondada ay haweenka ku leeyihiin baarlamaanka cusub ee lasoo dhisi doono.
Maamul goboleedyadda qaarkood ayaa qoondada haweenka qasab looga dhigay, iyadoo kuraas dhowr ah ka kansalay, halka maamulo kale ay sidii ay doonaan ka yeeleen, waxaana tusaale cad ah maamulada Jubbaland iyo Puntland.
Waxaa qoondada haweenka si la yaab leh oo khilaafsan sidii loogu talogalay looga dhaqan geliyay maamulka Hirshabeele, waxaana dhacday in beelaha qaarkood lagu qasbay haween farabadan, halka beelo ay waajib ku aheyd inay haween u qoondeeyaan kuraas ay iska diideen.
Haweeneyda ku magacaabaan guddoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed ayaa maamulka Hirshabeele dhawaan ku bogaadisay inuu ugu horeeyo qoondada haweenka.
Balse, waxaa la yaab laheyd in Batuulo ay ka mid aheyd kor-joogtada doorashada ee ku fashilantay in beesha ay kasoo jeedo ee Harti-Abgaal haween ku daraan xildhibaanada ay lahaayeen, waxaana beeshaan soo dooratay seddax xildhibaan oo dhammaantood rag ahaa.
Gaba-gabadii, Imaamka beesha Harti-Abgaal ayaa si cad uga hor-yimid qoondada haweenka, waxaana la dhinac maray qoondada haweenka, halka beesha Gaaljecel laba haween ah uu ku cadaadiyay madaxweynaha Hirshabeele oo xaaskiisa ay ka mid tahay xildhibaanada soo baxay.